Incest | Myanmar Incest Book Incest – Myanmar Incest Book
💞 *** ဟင့်​အင်း *** 💞
💞 *** ဟင့်​အင်း *** 💞 🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹 ( စ,ဆုံး ) —————————– ‌ရေး📝‌‌ ‌Annonymous 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 #Credit to Feeling အင်းစက်​ဇတ်​လမ်းတိုပါ။ တကယ့်​အဖြစ်​အပျက်​ကို အပိုထည့်​​ရေးသည်​။ အင်းစက်​မကြိုက်​သူများ ​ကျော်​သွားပါ။ အင်းစက်​ကြိုက်​နှစ်​သက်​သူမိတ်​​ဆွေများ ဖီလင်​ယူရုံသာ ဆင်​ခြင်​လို့ဖတ်​ပါရန်​။ 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 ကြည်​ပြာ အပျို​ဖော်​ဝင်​လာ​တော့ သူပထမဆုံး စွဲလမ်းတဲ့အချစ်​ဦးက အခြားသူမဟုတ်​ ..... Read More
ခေးချစ်တဲ့ခေးကိုကို (incest)စ/ဆုံး ဒီဝတ္တုသည်​ စိတ်​ကူးယဉ်​ဝတ္တု ဖြစ်​သည့်​အတွက်​ လိုက်​လံ့ အတုမခိုးကြပါရန်​ ​မေတ္တာ ရပ်​ခံအပ်​ပါသည်​။ Credit to Original Writer ထက်​ထက်​​အောင်​ ​နေ့လည်​ဘက်​တွင်သူမ သူငယ်​ချင်း ပိုးပိုးအိမ်​သို့ထွက်​လာခဲ့သည်။​ “ဟဲ့ ထက်​ထက်​ လာ” ပိုးပိုးကသူမကိုခရီးဦးကြိုပြ၍ အိမ်​ထဲ​ခေါ်လေသည်​ သူမတို့အိမ်​​ရှေ့ကခုံမှာထိုင်​လိုက်​ကြသည်။​ စကားခဏ​ပြောပြီး အပြင်​သွားကြမယ်​ ပိုးပိုး ဟုသူမ ​ပြောလိုက်​သည်။ သူမတို့အပြင်​ထွက်​လာခဲ့ကြသည်။​ ..... Read More
ကျွန်တော်နှင့် ထိုနှစ်ယောက် – စ\_ဆုံ
ကျွန်တော်နှင့် ထိုနှစ်ယောက် – စ\_ဆုံး ko si -် ရေးသည်။ အင်းစက်စာပေဖြစ်ပါသည်။ ============================ ​အောင်​မျိုးသူမှာ အသက်​ ၁၉နှစ်​​ရှ်ိ​ ပီဖြစ်​ပီး ​နောက်​ဆုံးနှစ်​​ဖြေဆိုပီးထား ​ပီး ​ကျောင်းပိတ်​ထားချိန်ုဖြစ်​​လေသည်​ ထို့​ကြောင့်​ ဘာအလုပ်​မှလည်း မ​လျှောက်​ရ အိမ်​၌ပင်​ ​ယောင်​​ခြောက်​ဆယ်​ အပြင်​သွားလိုက်​ လမ်းသလားလိုက်​ဖြင့်​ရှိ​နေခဲ့​လေသည်​ သူတို့မှာ မိသားစု၃​ယောက်​ရှိကာ ​မေမေ နှင့်​ မမရယ်​ သူရယ်​ဖြစ်​ပီး ..... Read More
Nyoe Sitt Khwine wallမှကူးယူသည်​။ အင်းစက်​ဖြစ်​သည်​ဖြစ်​နိုင်​ရင်​ဝင်​မဖတ်​သင်​.ပါ နှစသစ်​ကူးရဲ.ရူးမိုက်​မှုများ ကျွန်​​တော.နာမည်​ကလင်းထက်​​ကျောင်းပြီးကတည်းကဝါသ နာပါရာဓာတ်​ပုံခန်း​လေးဖွင်​.ပြီး​ပျော်​​ပျော်​​နေရင်းဘဝကိုဖြတ်​ သန်း​နေသူပါ။ကျွန်​​တော်​မှာမိဘနှစ်​ပါးကမရှိ​တော.ပါဘူးဒါ​ပေ မယ်​.တစ်​​ကောင်​ကြွတ်​​တော.မဟုတ်​ဘူးညီမ​လေးတစ်​​ယောက်​ ​တော.ရှိတယ်​အရွတ်​တုံး​လေး​ပေါ.တစ်​ဦးတည်း​သောညီမ​လေးကလည်းဖြစ်​ခင်​တွယ်​စရာဆိုလို.မိသားစုရယ်​လို.သူပဲ ရှိ​တော.အစစအရာရာအလိုလိုက်​ထား​တော.ကျွန်​​တော.ကို ​ကြောက်​ရ​ကောင်းမှန်းမသိသူငယ်​ချင်း​ပေါင်း​ပေါင်းပြီးအရမ်းကို နွဲ.ဆိုးဆိုးတက်​တာ။စိတ်​​ကောက်​တက်​တာလဲလွန်​​ရော။ကျွန်​ ​တော.မှာသူစိတ်​​ကောက်​မှာကိုအရမ်း​ကြောက်​​နေရတာမ​ကြောက်​လို.လဲမရဘူးရယ်​စိတ်​​ကောက်​​ပြေ​အောင်​ရိုးရိုး​ချော.လို. မှမရတာသူလိုချင်​တဲ.ဟာ​လေးဝယ်​​ပေး​တော.မှစိတ်​​ကောက်​ ​ပြေတာအိမ်​မှာကလည်း​မောင်​နှမနှစ်​​ယောက်​တည်းဆို​တော. သူမှစကားမ​ပြောရင်​​ပြောမဲ.လူကမရှိပြင်း​ခြောက်​​ခြောက်​နဲ.မို. သူစိတ်​မ​ကောက်​​အောင်​သတိထား​နေရတာ။ဒါလဲကြံဖန်​ပြီး ရစ်​တက်​​ကောက်​တက်​တဲ.အမတန်​ဆိုးတဲ.ချစ်​ညီမ​လေး​ပေါ. သူနဲ.ကျွန်​​တော်​ကအသက်​ဆယ်​.နှစ်​နှစ်​​လောက်​ကွာတယ်​ညီမ​လေးကအခုဆိုတကသိုလ်​တက်​​နေပြီ​လေအ​ပေါင်းအသင်း ​တွေစုံလာ​တော.ပညာ​ပေါင်းစုံတက်​စပြု​နေပြီဖြစ်​​တော.မအား တဲ.ကြားကသူ.ကိုဂရုတစိုက်​​စောင်​.ကြည်​.​နေရတယ်​ကိုယ်​ ပိုင်​အလုပ်​မို.​တော်​​သေးတာ​ပေါ. ညီမ​လေးနာမည်​ကဆုရတီကို.ညီမမို.​ပြောတာမဟုတ်​ဘူး ခနာကိုယ်​အချိုးအစားက​တော.​ကိုရီးယား​မော်​ဒယ်​မ​လေးကျ​နေ တာပဲအသား​လေးကဖြူ​ဖွေးဝင်းအိ​နေပြီးဆံပင်​ကခါးလည်​ ​လောက်​နဲ.အရမ်းကိုချစ်​ဖို.​ကောင်းတာ။ကို​ကျောင်းသားဘဝ ကမတရား​ပွေးခဲ.ဘာလာလာ​တွေ.မ​ရှောင်​လုပ်​ခဲ.ဘူး​တော. အခုကိုယ်​.ညီမ​လေးအရွယ်​​ရောက်​လာ​တော.ကိုလို​ကောင်​ ..... Read More
အင်းစက်စာပေ မောင်လေးနဲ့အတူ – စ\_ဆုံး မောင်နှမချင်း လိုးတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပါ အာကာမင်း ရေးသား၍ တိတ်တခိုး မှ ကူးယူသည်။ #SawMon မျှဝေသည်။ အင်းစက်စာပေဖြစ်ပါသည်။ ============================ သံလွင်ဖြူအနေနဲ့ သူမ၏မောင်ဖြစ်သူ မင်းခန့်ကိုတွေ့ရသည်နှင့်တပြိုင်နက် အားကိုးတကြီးဖြင့် မင်းခန့်၏ခန္ဓာကိုယိကို တင်းကျပ်စွာပွေ့ဖက်ထားလိုက်ရင်း မျက်ရည်များလည်း စီး ကျလာခဲ့သည်။ သူမ၏မိဘနှစ်ပါးမှာ တရားဝင်ကွာရှင်းထား ကြပြီး သူမကအဖေနဲ့အတူ ရန်ကုန်တွင်နေခဲ့ရပြီး ..... Read More
အင်းဆက်​ အာရုံ wallမှကူးယူသည်​။ အင်းစက်​စာ​ပေဖြစ်​သည်​ မခွဲရက်​မခွာနိုင်​ ဘာလိုလိုနဲ.မိန်းမနဲ.ကျွန်​​တော်​လမ်းခွဲကာကိုယ်​.လမ်းကို ​လျှော်​ခဲ.ကြတာဆယ်​.ငါးနှစ်​တင်းတင်းပြည်​.ခဲ.ပါပ​ကော သ​ဘောထားချင်းမတိုက်​ဆိုင်​တာထက်​အဓိက။ကသူ.ရဲ. အ​ကြောင်းအမျိုးမျိုးရှာရစ်​တဲ.ဒဏ်​မခံနိုင်​တာန.သည်းမခံနိုင်​ တဲ.အဆုံးသူကလည်းကွာရှင်းခွင်​.​တောင်းဆိုတာနဲ.ပဲ ကွာရှင်းခဲ.ကြချင်းဖြစ်​သည်​မချစ်​လို.​တော.မဟုတ်​။သူနဲ.ကျွန်​ ​တော်​ကငယ်​ချစ်​​တွေသမီးရည်းစားဘဝက​တော.​တော်​​တော်​ ​ပျော်​ဖို.​ကောင်းခဲ.တာ​တော.အမှန်​ပင်​။ချစ်​မဝရှုမဝနဲ.​ပျော်​မဆုံး အစကတည်းက​တော.ကျွန်​​တော်​သတိထားမိခဲ.သင်​.တယ်​ လို.ကို.ကိုယ်​ကို​နောင်​တရမိခဲ.သည်​။ရည်းစာဘဝတည်းက အရစ်​သန်​သည်​ဒါ​ပေမယ်​.အရမ်းကြီး​တော.မဟုတ်​ကျွန်​​တော်​ စိတ်​ဆိုးရင်​သူ.ဘာသာပြန်​​လျှော်​သွားတက်​​သော​ကြောင်​. ရည်းစာဘဝကအဲဒါ​လေးကိုသာယာမိတာ​တော.အမှန်​ပါပဲ သို.​ပေမယ်​.လည်းတကယ်​တန်းအိမ်​​ထောင်​ကျ​တော.အရင်​က ​လျှော်​တာ​တွေကမ​သေချာ​သေးတဲ.အချိန်​မို.လို.ခွင်​.လွတ်​ခဲ.တာ မှန်းသိလိုက်​ရ၏။ကိုယ်​ကခူး​တော.ဆူးမိတာ​ပေါ.ဗျာ အလုပ်​ပင်​ပန်းပြီးပြန်​လာပါတယ်​ဆိုမှ​ရွှေရင်​ဆို.တဲ.စကား​တွေ ရှာကြံ​ပြောတက်​ရစ်​တက်​သည်​။ချစ်​​တော.လည်းကိုယ်​က အ​လျှော.​ပေးသိပ်​မကြာဘူးကိုယ်​ဝန်​ရပြီးက​လေးတစ်​​ယောက်​ ထွက်​လာ​တော.မနက်​ခင်း​ရေ​နွေးအိုးနဲ.အပြိုင်​ဆူ​တော.တာ ပါပဲ။ခပ်​တည်​တည်​နဲ.မနက်​စာမစားရင်​အိမ်​​ပေါက်​ဝထိ​ပေါက်​ ​ပေါက်​​ဖောက်​နားညဉ်းသက်​သာ​အောင်​​နောက်​ကြမှအိမ်​ပြန်​ ​တော.လည်းမအိပ်​မချင်းရစ်​နဲ.ကြာ​တော.လည်းအချစ်​​ပေါ. လာတယ်​က​လေးသံ​ယောဇဉ်​ကရှိ​သေး​တော.အတက်​နိုင်​ဆုံး သည်​ခံ​ပေမယ်​.​ယောက်​ခမကပါစစ်​ကူပါလာ​တော.​ပေါက်​ကွဲ ..... Read More